ရာထူး: Video Editor
ကျနော်တို့တောင်ပိုင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာသေးငယ်တဲ့, အောင်မြင်သောဗီဒီယို & ဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကော်ပိုရေးရှင်း, Non-အမြတ်အစွန်း, စတင်များနှင့်အမျိုးမျိုးသောဆီလီကွန်ဗယ်လီအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်မြှင့်တင်ရေးဗီဒီယိုနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များလုပ်ပါ။ မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ website နှင့်အစုစုကိုထုတ်စစ်ဆေး: spiralmoon.com.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးအဖွဲ့က join ဖို့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု-အချိန် / ယာယီဗီဒီယို Editor ကိုထည့်သွင်းဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပါ။ ကျနော်တို့ဆက်ကပ်အပ်နှံရဲ့တစ်စုံတစ်ဦး, အသည်းအသန်ရှာနေနေကြတယ်, Hard-အလုပ်လုပ်, အသေးစိတ်ကြီးစွာသောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ကြီးမြတ်သဘောထားကိုရှိပါတယ်! ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်တစ်နိယာမဖြစ်တယ်, ဒါနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များအမျိုးအစားအားလုံးကိုများ၏လိုအပ်ချက်များဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာသင်ယူနှင့်လျင်မြန်စွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းလည်းအရေးကြီးသောအဖြစ်ကျွမ်းကျင်မှုဖြေရှင်းရေးပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျအစမှအပြေးမြေပြင်ကိုထိဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။ လျှောက်ထားရှိရမည် Adobe Premiere ၏ကျယ်ပြန့်အသိပညာကျနော်တို့ကိုသင်လေ့ကျင့်ဖို့အချိန်မရှိဘူးအဖြစ်။ သင်တစ်ဦးရှိရမည် ကောင်းသောအလုပ်ကိုကျင့်ဝတ်, ထိရောက်နှင့်ထူထောင်အလုပ်စီးဆင်းမှုနှင့် အကောင်းတစ်ဦးအရှိန်အဟုန်မှာတည်းဖြတ်နိုင်ပါလိမ့် စဉ်တုန်းပဲ အသေးစိတ်ဖို့သတိထားရမှာ.
ဒါကအလုပ် $ 15 / နာရီမှာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအချိန်အနေအထားအဖြစ်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ hours ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်မည်မျှအလုပ်ငါတို့သည်စီမံကိန်းများကို၏နံပါတ်ပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ဤအချိန်မဆိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အရှည်အဘို့ဆက်ပြီးမှအာမခံယာယီအနေအထားနှင့်မဟုတ်ပါဘူး။ ကုမ္ပဏီမှဆက်ပြောသည်တန်ဖိုးကိုဖြစ်ပြသူတစ်ဦးကအရည်အချင်းပြည့်မီအချိန်ပိုင်းဝန်ထမ်း နိုင် (သို့သော်အဘယ်သူမျှမအာမခံချက်ရှိပါတယ်) နောက်ဆုံးမှာ $ 2,800 / လ + သင်၌ငါဆောင်ခဲ့ဆိုစီမံကိန်းများကို / client များအနေဖြင့်တစ်ဦးရာခိုင်နှုန်း၏လစာနှင့်အတူအပြည့်အဝအချိန်အနေအထားပူဇော်ရ။
တည်းဖြတ်ခြင်းများအတွက်သင့်ကိုယ်ပိုင် PC ကို / Mac ကိုပေးနိုင်စွမ်းတဲ့လိုအပ်ချက်သော်လည်းမရ, တစ်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးအတွက်လူတစ်ဦးအင်တာဗျူးအဘို့ပေါ်လာနိုင်သူသာလျှင်လျှောက်ထားထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ သငျသညျကို Santa Clara,, CA အနီးနထေိုငျဘူးဆိုရငျ, လျှောက်ထားကြဘူးပါ။
ကျယ်ပြန့်အတွက် Adobe Premiere နှင့်အတူအတှေ့အကွုံမြားနှငျ့ Adobe က Creative Cloud ၏ကျန်နှင့်အတူသာလျှင်လျှောက်ထားထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏အသိပညာနှင့်အတွေ့အကြုံများပေါ်တွင်သင်စုံစမ်းမည်သင်စမ်းသပ်မလွန်နိုင်သော်လည်းလျှင်, သင်စဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
လျှောက်ထားသူများသည်လည်းစီးပွားဖြစ် / ကော်ပိုရိတ်တည်းဖြတ်ရေးနှင့်အတူအတှေ့အကွုံရှိရမည်နှင့်သင့်အစုစုကိုအတူကသရုပ်ပြနိုင်ဖြစ်ရပါမည်။ သက်သက်သာဖန်တီးမှုစီမံကိန်းများကိုကြည့်ရှုမည်မဟုတ်ပါ။
Adobe Premiere ပေါ်တွင်ဗီဒီယိုများ Edit ။ လုပ်ငန်းအသွားအလာနားလည်ကာအချိန်မီထုံးစံ၌တည်းဖြတ်မူကြမ်းထုတ်လုပ်နိုင်ဖြစ်ရပါမည်။
client များနှင့်အတူ interface - အဓိကအားအီးမေးလ်ဖြင့်။ client များ '' လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ခြင်းနှင့်သူတို့ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ဖြစ်ခြင်းသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂရိတ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကျွမ်းကျင်မှုအရေးကြီးလှသည်။
Adobe Premiere (တောင်းပန်ပါတယ်, အဘယ်သူမျှမ Final Cut Pro X ကို) နဲ့အတှေ့အကွုံတစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားဖြစ် / ကော်ပိုရိတ်တည်းဖြတ်ရေးနှင့်အတူအတွေ့အကြုံကိုတစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။
အလင်းရောင်, အသံနှင့်ဗီဒီယို / ဗွီဒီယိုကင်မရာနည်းပညာဆိုင်ရာရှုထောင့်များ၏နားလည်မှုကြီးမားတဲ့ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။
အတူအတွေ့အကြုံကို ကို Canon ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာများတစ်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။
3D ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ, အထူးသက်ရောက်မှုများ တင်ဆက်မှုတစ်ခုပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှု (အဓိကအားဖြင့် Windows ကို) တစ်ပေါင်းဖြစ်ကြသည်။
ယောဘသည်အမျိုးအစားများ: အပိုင်း-အချိန်, ယာယီ
လစာ: $ 15.00 မှ $ 20.00 / နာရီ
Adobe Premiere:4နှစ်ပေါင်း
Santa Clara,, CA 95050
ယခင်: အပိုင်းအချိန်ပေး Audio ဗီဒီယိုပွဲများ Technician အ